29 Afei Yakob toaa n’akwantu no so kɔɔ Apuei Famfo+ asase so. 2 Na ohui sɛ abura bi wɔ asase no so a nguankuw abiɛsa butubutuw ho, efisɛ saa abura no mu nsu na wɔsaw ma mmoa+ no nom; na na ɔbo kɛse bi da abura no ano.+ 3 Sɛ wɔboaboa nguan no nyinaa ano wɔ hɔ a, woyi ɔbo no fi abura no ano, na wɔma nguan no nsu, afei wɔsan de ɔbo no to abura no ano. 4 Na Yakob bisaa wɔn sɛ: “Me nuanom, ɛhe na mufi?” na wobuae sɛ: “Yefi Haran.”+ 5 Afei obisaa wɔn sɛ: “Munim Nahor+ banana Laban?”+ Na wɔkae sɛ: “Yenim no.” 6 Ɛnna obisaa wɔn sɛ: “Ne ho ye anaa?”+ Na wobuae sɛ: “Ne ho ye. Na ne babea Rahel+ mpo na ɔde nguan reba no!”+ 7 Ɔtoaa so ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ́ ade nsae. Bere nsoe sɛ moboaboa mmoa no ano. Momma nguan no nsu na momma wonkodidi.”+ 8 Ɛnna wobuae sɛ: “Yenni ho kwan sɛ yɛyɛ saa gye sɛ nguan no nyinaa ba ha na woyi ɔbo no fi abura no ano. Ɛno ansa na yebetumi ama nguan no nsu.” 9 Bere a ogu so ne wɔn rekasa no, Rahel+ de ne papa nguan bae, efisɛ na ɔyɛ oguanhwɛfo.+ 10 Bere a Yakob huu ne wɔfa Laban ba Rahel ne Laban nguan no, ntɛm ara na Yakob kopiaa ɔbo no fii abura no ano, na ɔmaa ne wɔfa Laban nguan no nsu.+ 11 Afei Yakob few+ Rahel ano na ɔmaa ne nne so sui.+ 12 Yakob ka kyerɛɛ Rahel sɛ ne maame ne Rebeka ma enti ne busuani+ ne Rahel papa. Na Rahel de mmirika kɔka kyerɛɛ ne papa.+ 13 Laban tee ne wɔfase Yakob ho asɛm ara pɛ na ɔde mmirika kohyiaa no.+ Afei ɔbam no few n’ano, na ɔde no baa ne fie.+ Na Yakob kaa nea asi nyinaa kyerɛɛ Laban. 14 Na Laban ka kyerɛɛ no sɛ: “Woyɛ me dompe ne me honam.”+ Enti ɔne no tenae ɔsram biako. 15 Afei Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ: “Woyɛ me nua+ nti wobɛsom me kwa anaa?+ Dɛn na wubegye?+ Ka kyerɛ me.” 16 Ná Laban wɔ mmabea baanu. Ɔpanyin no din de Lea+ na akumaa no de Rahel. 17 Nanso na Lea aniwa mma yɛ nketenkete, na Rahel+ de, na ne ho yɛ fɛ fi soro besi fam.+ 18 Ná Yakob dɔ Rahel, enti ɔkae sɛ: “Mepɛ sɛ mesom wo mfe ason na wode wo babea kumaa Rahel ma me.”+ 19 Ɛnna Laban kae sɛ: “Eye sɛ mede no bɛma wo sen sɛ mede no bɛma ɔbarima foforo.+ Tena me nkyɛn.” 20 Na Yakob somee mfe ason sɛ ɔde benya Rahel,+ nanso ɛyɛɛ n’ani so sɛ nna kakraa bi efisɛ na ɔdɔ no.+ 21 Afei Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ: “Me bere adu, mesrɛ wo fa me yere ma me na menkɔ ne ho.”+ 22 Ɛnna Laban frɛfrɛɛ nnipa a wɔwɔ hɔ nyinaa behyiae na ɔtow pon.+ 23 Nanso ade sae no, ɔde ne babea Lea brɛɛ no na ama wakɔ ne ho. 24 Na Laban de n’afenaa Silpa+ maa ne babea Lea sɛ n’abaawa. 25 Ade kyee no ɔbɛhwɛ a, Lea ni! Enti obisaa Laban sɛ: “Dɛn na woayɛ me yi? Ɛnyɛ Rahel nti na mesom wo? Dɛn nti na woadaadaa me?”+ 26 Ɛnna Laban buae sɛ: “Ɛha de, yɛnyɛ no saa. Yɛn de, yɛmfa akumaa no mma aware ansa na ɔpanyin no aware. 27 Wo ne ɔbea yi ntena nnawɔtwe nwie.+ Ɛno akyi no mede ɔbea biako no nso bɛma wo na woasom me mfe ason aka ho.”+ 28 Enti Yakob penee so ne ɔbea no tenae maa nnawɔtwe no soe, na ɛno akyi no ɔde Rahel maa no aware. 29 Na Laban de n’afenaa Bilha+ maa Rahel sɛ n’abaawa. 30 Afei ɔkɔɔ Rahel nso ho, na na ɔdɔ Rahel sen Lea,+ na ofii ase som Laban mfe ason bio.+ 31 Yehowa hui sɛ ɔnnɔ Lea no, obuee ne yam,+ na Rahel de, ɔbɛyɛɛ obonin.+ 32 Afei Lea nyinsɛn woo ɔbabarima na ɔtoo ne din Ruben,+ na ɔkae sɛ: “Yehowa abɛhwɛ m’amanehunu,+ na afei me kunu bɛdɔ me.” 33 Na ɔsan nyinsɛn woo ɔbabarima, na ɔkae sɛ: “Yehowa ate+ sɛ wɔnnɔ me, enti na wama me oyi nso.” Na ɔtoo ne din Simeon.+ 34 Na onyinsɛn bio woo ɔbabarima, na ɔkae sɛ: “Afei de, me kunu bɛka aba me ho, efisɛ mawo mmabarima baasa ama no.” Enti ɔtoo no din Lewi.+ 35 Na ɔsan nyinsɛn woo ɔbabarima, na ɔkae sɛ: “Afei de, mɛkamfo Yehowa.” Enti ɔtoo ne din Yuda.+ Afei n’awo tew kɔe.